Adobe Creative Cloud: Guo Mbipụta Ọma na Ikike! | Martech Zone
Mgbe Adobe Creative Cloud malitere, m debanyere aha! Enweghịzị ịzụrụ ikikere dị oke ọnụ na ijikwa igodo DVD… naanị ibudata ma wụnye dịka ọ dị mkpa. Anyị nwere otu egwuregwu dị ịtụnanya na-arụ ọrụ na atụmatụ anyị, mana anyị na-enwerịrị ịmegharị ngwa ngwa ma ọ bụ gbanwee mgbe anyị nwetara faịlụ site n'aka ndị na-emepụta anyị, yabụ azụrụ m ikike. Onye mụ na ya na-azụkọ ahịa malitere inye aka, yabụ azụrụ m ya akwụkwọ ikike nke abụọ. Ma otu n’ime ndị ahịa anyị enweghị ego maka akwụkwọ ikike mana ọ dị mkpa idezi faịlụ site n’oge ruo n’oge, yabụ azụrụ m ha ikike.
Agaghị m agụ akwụkwọ ọma ahụ
Echere m na m na-akwụ ụgwọ ego ikike kwa ọnwa ma nwee ike ịgbakwunye ma wepu ikikere dịka ọ dị mkpa. Achọpụtara m n'ụzọ siri ike na nke ahụ abụghị ikpe. Mgbe azụmahịa m na onye òtù ulo oru ya onwe gị n'ụlọnga na m ahịa ama ka onye ọrụ na-aga ... M hụrụ onwe m na-akwụ ụgwọ maka abụọ ejibeghi ikikere kwa ọnwa. Mgbe m sụrụ ngọngọ site na ngalaba nchịkwa dị egwu maka Adobe Creative Cloud ma wepụ ndị ọrụ abụọ a, achọpụtara m na ọnụ ọgụgụ ikike ahụ ka dị otu.
A ngwa ngwa search maka “wepu ikikere” na ihe ọmụma ha isi nyere nzaghachi ọ dịghị onye mgbe chọrọ… kọntaktị nkwado. Ugh… M mepere window nkata. Echere m na ikekwe mmadụ ga-agwa m okwu site na mwepu ikike. Mgbe 23 nkeji na 51 sekọnd, ha mere. Mana o nwere ike obughi ihe mere i jiri chee.
A na-esonye nkata ahụ n'ezie iji gosi gị ọkwa enweghị isi nke a tụbara m, nke leghaara eziokwu ahụ anya na m na-eji ikikere nke m. Ama m etu mmemme a si dị ukwuu, M zụta ikike!
Otu ụlọ ọrụ nke Adobe ga-eme ihere n'eziokwu na-eji atụmatụ a iji dọpụ ndị ahịa ha maka ego ole na ole. Amaghị m na m na-amaghị ama na m na-abanye aka na nkwekọrịta ọhụụ kwa afọ. Amaara m na ụfọdụ azụmaahịa nwere ọnụ ahịa ndị ahịa siri ike na ndị ahịa, mana nke ahụ adịghị adị na Adobe Creative Cloud. Dịka ọ bụla na SaaS ọzọ, ekwesịrị m ịgbakwunye ma wepu ikikere ndị ọrụ dị ka achọrọ. Ihe mere m ji debanye aha m bụ na abụ m onye ọrụ na-eme ihe n'eziokwu nke nwere ekele maka uru nke ikpo okwu ma jiri obi ya kwụọ ụgwọ ya.
Ugbu a ana m akwụ ụgwọ 300% nke ụgwọ ikike m maka Adobe Creative Suite yana akwụkwọ ikikere abụọ ndị ọzọ na-ehi ụra. Adobe, Aga m akpọ gị July 16, 2018. Ikekwe ọ bụ oge m ga-achọta nyiwe ndị ọzọ.
Amụma: Enweghi nhọrọ na ogwe nhazi iji gbanyụọ mmeghari onwe.
Tags: adobeAdobe Adobe CloudAdobe creativelọadobe ikikereigwe okikeikikere
Na-ebute Omnichannel maka Black Friday na Cyber ​​Monday